လူသိနည်းနေသေးတဲ့ သမိုင်းဝင် ရှာလ်လုမ်းခံတပ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Thutazone
လူသိနည်းနေသေးတဲ့ သမိုင်းဝင် ရှာလ်လုမ်းခံတပ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီနယ်ခဲျ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းတွင် ထင်ရှားသည့် မင်းလှခံတပ်ပြီးလျှင် ဒုတိယအထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည့် ရှာလ်လုမ်းခံတပ် (Siallum Fort) ကြီးသည် ချင်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တီးတိန်မြို့နယ် ဝေါ့လာ့ကျေးရွာမှ တစ်မိုင်ခွဲခန့်အကွာ ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေ ၄ဝဝဝ တွင်တည်ရှိပြီး လောင်ဂျီကျု ၉၃ ဒီဂရီ ၄၄ မိနစ်နှင့် မြောက်လတ္တီကျု ၂၃ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ်တွင် တည်ရှိသည်။
သို့သော်လည်း ချင်းလူမျိုးတို့သည် ဗြိတိသျှတို့အပေါ် သံသယရှိလာပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား ဗြိတိသျှနှင့် ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခဲ့ရသည်။ ၁၈၈၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် တာရွှန်းစစ်သည်အင်အား ၅ဝဝ ကျော်မှ အင်းဒင်း (ယခုအန်းတဲန်) ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီး စစ်သည် ၃ဝဝ သည် ကလေးဝ၊ နောက်ထပ်စစ်သည် ၃ဝဝ သည် တောင်တွင်းချိုင့်ဝှမ်းများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ စီးယင်း စစ်သည် ၅ဝဝ သည် ကလေးမြို့နှင့် နောက်ထပ် စစ်သည် ၆ဝဝ သည် ကဘော် (Kubu)ချိုင့်ဝှမ်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
ဗြိတိသျှစစ်တပ်သည်လည်း စခန်းများအား အင်အားဖြည့်ပြီး ချင်းတပ်ပေါင်းစုတို့အား တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ တာရွှန်းတို့သည် ဗြိတိသျှကိုတော်လှန်သည့် ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသားနှင့် နောက်လိုက်များအား ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသား စော်ဘွားဟောင်းများ၊ စီးယင်း၊ စုတ်သဲ၊ ကမ်ဟောက်တို့နှင့်အတူ မြေပြန့်ရှိဗြိတိသျှစစ်စခန်းများအား ၁၈၈၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးလုံး သွားရောက်တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ဗြိတိသျှတို့က တာရွှန်းတို့ကို ရွှေဂျိုးဖြူမင်းသားအဖွဲ့အား လက်လွှတ်ရန်၊ မလွှတ်ပါက ချင်းတောင်အား စစ်တပ်ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၈၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ ယင်းနည်းတူ စီးယင်းတို့ထံတွင်လည်း ဖမ်းထားသူများကိုလွှတ်ရန် ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ တာရွှန်းနှင့် စီးယင်းတို့သည် ဗြိတိသျှတို့၏ ရာဇသံကို ဂရုမစိုက်သည့်အတွက် ဗြိတိသျှတို့သည် ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စီးယင်းနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရန် စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ စီးယင်းနယ်ဘက်ကို လမ်းဖောက်ရင်းဖြင့် စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ဗြိတိသျှတို့ စီးယင်းနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရန် ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာပင် ရွှေဂျိုးဖြူ၊ ရှမ်းစော်ဘွား၊ တာရွှန်းတို့နှင့် စီးယင်း၊ စုတ်သဲ၊ ကမ်ဟောက်တို့သည် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာဖြင့် မြေပြန့်ရှိ ဗြိတိသျှစခန်းများကို ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ များမကြာမီ ကလေးမြို့အနီး ပြင်သာဆိပ်ကမ်း သို့ ရောက်ရှိလာကြကာ စစ်တပ်စခန်းချထားလေသည်။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ပေါင်းစုတို့သည် ကလေးမြို့နယ် ပြင်သာဆိပ်ကမ်းသို့စခန်းချသော နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် ဆင်းခဲ့လေသည်။
အင်္ဂလိပ်နှင့် ချင်းတပ်ပေါင်းစုတို့ ပထမဦးဆုံး ပြင်သာဆိပ်ကမ်း၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရာ အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ စစ်သားငါးဦးကျဆုံးပြီး အမြောက်အမြား ဒဏ်ရာရရှိလေသည်။ ချင်းတပ်ပေါင်းစုမှလည်း လေးဦးကျဆုံးသွားခဲ့ရာ ချင်းတပ်ပေါင်းစုနှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ ပထမဦးဆုံး အကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်သောနေရာဖြစ်သဖြင့် ထိုဒေသ ပြင်သာဆိပ်ကို အမှတ်(၁) ခံတပ်စခန်း (N0. 1st Stockade) ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့လေသည်။
သူ့ကျွန်မခံလိုဘဲ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနှင့် ကိုယ့်မြေတို့ကို မစွန့်လွှတ်လိုသော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သည့် ချင်းအမျိုးသားများမှ ချင်းတောင်တန်းရှိ ထုတ်လိုင်ကျေးရွာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်စခန်းကို တိုက်ဖျက်ခြင်းအလို့ငှာ ဘွင်မံကျေးရွာတိုက်သူကြီး ဦးလျင့်ကမ်းဦးဆောင်သော စီးယင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၇ ဦးတို့သည် ဝေါ့လာ့ကျေးရွာနယ်မြေ ရှာလ်လုမ်းရွာတွင် မြေတွင်းများတူးကာ ကျောက်ပြားချပ်ကြီးများ၊ ပျဉ်ချပ်များ၊ သစ်ရွက်များဖြင့်ဖံုံးအုပ်ပြီး ခံတပ်ကို ကြီးကျယ်စွာတည်ဆောက်ခဲ့ကြကာ ရှာလ်လုမ်း (Siallum) ဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်သည် ခံတပ်အကြီးအကျယ်တည်ဆောက်ကြောင်း သတင်းရသည်နှင့် ချက်ချင်း မတိုက်ဝံ့ဘဲ စစ်ကူရောက်ရှိသည်အထိ ထုတ်လိုင်ကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းမှ စောင့်ဆိုင်းလေသည်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်သော ချင်းတော်လှန်ရေးသမားတို့၏ အကြီးဆုံးခံတပ်ဖြစ်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်မှ စစ်တပ်အင်အားတောင့်တင်းမှု လိုအပ်ကြောင်း သတိမူလျက် အမှတ်(၂) နောဖော့တပ်ရင်း (2nd Battalion Norfolk Regiment) မှ အင်အား ၆၅၊ အမှတ်(၄၂) ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း (42nd Gurkha Light Infantry)မှ အင်အား ၆ဝ၊ စုစုပေါင်းအင်အား ၁၂၅ တို့ လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် ဗိုလ်ကြီး စီအိပ်ချ်ဝဲစ်မိုးလန် (Captian CH. Westmoreland) ကွပ်ကဲဦးဆောင်ပြီး ၁၈၈၉ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်တွင် ထုတ်လိုင်ကျေးရွာတပ်စခန်းမှ ချီတက်ခဲ့လေရာ နံနက် ၁ဝ နာရီမှစတင်၍ ညနေ ၄ နာရီအထိ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားလေသည်။
အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်သည် ရှေ့သို့တစ်လှမ်းကိုမျှ ချီတက်ရန်မတတ်စွမ်းသဖြင့် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ခံတပ်အနီး တောင်ကုန်းကလေးတစ်ဖက်သို့ တစ်ဖာလုံခန့်နောက်ဆုတ်၍ ဂေါ်ရခါးတပ်သားများအား စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေရန်အတွက် အဖျော်ယမကာများကိုတိုက်ကျွေးပြီး ပြန်လည်ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာ ညနေစောင်းတွင် အကြီးမားဆုံးခံတပ်ကတုတ်ကျင်းကို သိမ်းပိုက်လေသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် နယ်ချဲ့စစ်တပ်ဘက်မှ ဆရာဝန်လီခွင် (Surgeon Le Quesne)သည် ၎င်းရရှိထားသော ဒဏ်ရာများဖြင့် အခြားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ရဲဘော်များဖြစ်သည့် ဒုတိယဗိုလ်မီချဲလ်နှင့် ဗိုလ်ကြီးမိန်းအပါအဝင် အခြားအကြပ်တပ်သားများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သဖြင့် ယင်း ၏ ရဲရင့်မှုနှင့် စစ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘုရင်မကြီး၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမြင့်မားဆုံး ဂုဏ်ပြုမှုဖြစ်သော ဝိတိုရိယဘွဲ့ (Victoria Cross)ကို ပေးအပ်နှင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ယင်းဆုတံဆိပ်ကို ယနေ့ထက်တိုင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံ ပြတိုက်များတွင် တွေ့မြင်နိုင်သေးကြာင်း သိရသည်။
ဆရာဝန်လီခွင် ၏ (Victoria Cross)ဆုရရှိခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရှာလ်လုမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပုံကို သိရှိနိုင်မည့်အပြင် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်က ချင်းတောင်ဘိုးဘွားများအား လွယ်လင့်တကူ မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြဘဲ ချင်းပြည်ကြီးကို လာရောက်တိုက်ခိုက်သူများ မည်သို့ပင် အင်အားကြီးလင့်ကစား ရဲဝံ့စွာဖြင့် ပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်သည့် ချင်းတောင်ဘိုးဘွားများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဂုဏ်ပြုရမည်ဖြစ်သလို အစဉ်လေးစားဂုဏ်ယူကြရမည်ဖြစ်သည်။